Tungsten - Luoyang esorowo Tungsten-Molybdenum Ihe Co., Ltd.
Njirimara nke tungsten
Atomic nọmba 74
CAS nọmba 7440-33-7
Atomic uka 183,84
agbaze ebe 3 420 ° C
esi ebe 5 900 ° C
Atomic olu 0,0159 nm 3
Njupụta na 20 ° C 19.30g / cm³
Crystal Ọdịdị ahụ na-eche nanị cubic
lattice mgbe nile 0,3165 [nm]
N'ụba na Earth jikọrọ ọnụ 1.25 [g / t]
Speed ​​nke ụda 4620m / s (na RT) (mkpa mkpanaka)
kwes mgbasa 4.5 μm / (m · K) (na 25 ° C)
kwes conductivity 173 W / (m · K)
Ọdụdọ resistivity 52,8 nΩ · m (na 20 ° C)
Mohs ekweghị ekwe 7.5
Vickers ekweghị ekwe 3430-4600Mpa
Brinell ekweghị ekwe 2000-4000Mpa
Tungsten, ma ọ bụ wolfram, bụ a chemical mmewere na akara W na ọnụọgụ nzùrùòkè 74. The aha tungsten na-abịa site na mbụ Swedish aha maka tungstate ịnweta scheelite, tung sten ma ọ bụ "oké nkume". Tungsten bụ obere metal hụrụ ndammana na Earth fọrọ nke nta nanị jikọtara ndị ọzọ ọcha ke chemical ogige kama naanị. Ọ na-e kwuru na ọ bụ dị ka a ọhụrụ mmewere na 1781 na mbụ dịpụrụ adịpụ dị ka a metal na 1783. Ọ dị mkpa ores gụnyere wolframite na scheelite.
The free mmewere dị ịrịba ama n'ihi na ya robustness, karịsịa eziokwu na ọ nwere kasị elu agbaze n'ókè nke niile ọcha chọpụtara,-agbaze na 3422 ° C (6192 ° F, 3695 K). Ọ na-nwere ndị kasị elu mmiri ịgbọ agbọ uche, na 5930 ° C (10706 ° F, 6203 K). Ya njupụta bụ 19,3 ugboro na mmiri, yiri nke uranium na gold, na nnọọ elu (banyere 1.7 ugboro) karịa nke-edu ndú. Polycrystalline tungsten bụ intrinsically kenkuwa na ike ihe onwunwe (n'okpuru ọkọlọtọ ọnọdụ, mgbe uncombined), na-eme ka o sie ike na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, dị ọcha otu-crystalline tungsten ọzọ bụ ductile na ike ga-ebipụ ya na a hard-ígwè hacksaw.
Tungsten ọtụtụ alloys nwere ọtụtụ ngwa, gụnyere incandescent bọlb filaments, X-ray akpa (dị ka ma ndị filament na iche), electrodes na gas tungsten aak ịgbado ọkụ, superalloys, na ụzarị ọkụ na echebe. Tungsten si ekweghị ekwe na elu njupụta na-enye ya agha ngwa ke abami projectiles. Tungsten ogige na-na-mgbe na-eji dị ka ulo oru akpali.
Tungsten bụ naanị metal si atọ mgbanwe usoro na a maara na-eme biomolecules na-achọta a ole na ole ụdị bacteria na archaea. Ọ bụ kpụ ọkụ n'ọnụ karịsịa mmewere maara na-dị oké mkpa ọ bụla dị ndụ organism. Otú ọ dị, tungsten emetụtakarị molybdenum na ọla kọpa metabolism na bụ dịtụ na-egbu egbu na-ọzọ maara iche nke ụmụ anụmanụ.
Molybdenum Rod , Molybdenum efere, Molybdenum , Tzm efere , Molybdenum mpempe akwụkwọ, Tzm mpempe akwụkwọ ,